Yakakamura Huru PST Faira mune Diki Mafaira - Iyo Nhanho-nhanho Nongedzo
musha Products DataNumen Outlook Repair Yakakamura Huru PST Faira mune Diki Diki
kushandisa DataNumen Outlook Repair Kupatsanura Faira Huru muVadiki
0.02 / 5 (kubva 1,613 mavhoti)
Nekuwedzera kuri kuwedzera nekukurumidza kwekutaurirana wega uye ruzivo, iyo Outlook PST faira, iyo ine idzi data, zvakare inowedzera zvinoshamisa. Naizvozvo, dzimwe nguva tinofanirwa kupatsanura hombe PST faira mune zvidiki, kune chero anotevera zvikonzero:
Saizi yakakura yefaira uye nhamba hombe yezvinhu inotungamira kunonoka kumhanya mune akawanda mashandiro, sekutsvaga, kufamba, nezvimwe, kuti iwe ugone kuzvikamura kuita zvidimbu zvidiki uye uwane irinyore uye nekukurumidza manejimendi pairi.
Outlook dzekare shanduro (97 kusvika 2002) haitsigire mafaira akakura kupfuura 2GB, saka kana yako faira ikasvika pamuganhu asi iwe uchiri kuda kuishandisa neshanduro dzekare, saka nzira chete ndeyekuchipatsanura kuita zvidimbu zvidiki.
Kana iwe uchikwanisa kuwana izvo zvirimo muhombe PST faira mune yako Outlook, ipapo unogona kushandisa Maonero ekuzvipatsanura nemaoko.
DataNumen Outlook Repair inogona kukubatsira iwe kupatsanura hombe PST faira kuita zvidiki zvidiki.
Cherechedza: Usati wapatsanura hukuru hwePST faira ne DataNumen Outlook Repair, ndapota vhara Microsoft Outlook uye chero mamwe maapplication anogona kuchinja iyo PST faira.
Enda ku tab, wobva wasarudza inotevera sarudzo:
uye gadza saizi muganho kune kukosha kuri pasi pe2GB. Zvinokurudzirwa kushandisa kukosha icho chinongova chidimbu che2GB kuitira kuti yako faira isasvike 2GB zvakare munguva pfupi, semuenzaniso, 1000MB. Ndokumbira utarise kuti iyo unit ndeye MB.
Sarudza yakawandisa Outlook PST faira sosi PST faira kuti igadziriswe:
Unogona kuisa zita refaira rePST zvakananga kana kudzvanya iyo bhatani rekutarisa uye sarudza iyo faira. Iwe unogona zvakare kudzvanya iyo bhatani kuti uwane iyo PST faira ichagadziriswa pakombuta yemuno.
Sezvo iyo PST faira yakawandisa, inofanira kunge iri mune Outlook 97-2002 fomati. Naizvozvo, ndapota taura fomati yayo yefaira ku "Outlook 97-2002" mubhokisi re combo padivi peinobva faira hodhi bhokisi. Kana iwe ukasiya fomati se "Auto Kutsunga", ipapo DataNumen Outlook Repair ichaongorora iyo sosi yakawandisa PST faira kuti ione mafomati ayo otomatiki Nekudaro, izvi zvinotora imwe nguva.
Nekutadza, riini DataNumen Outlook Repair Inoongorora uye inotsemura iyo sosi yakakwidziridzwa faira kuita akati wandei madiki madiki, yekutanga yakakamurwa yakamisikidzwa faira inonzi xxxx_fixed.pst, yechipiri inonzi xxxx_fixed_1.pst, yechitatu xxxx_fixed_2.pst, zvichingodaro, apo xxxx ndiro zita reiyo sosi PST faira. Semuenzaniso, kune sosi PST faira Outlook.pst, nekumisikidza, yekutanga yakakamurwa faira ichave Outlook_fixed.pst, uye yechipiri ichave Outlook_fixed_1.pst, uye yechitatu ichave Outlook_fixed_2.pst, nezvimwe.
Kana iwe uchida kushandisa rimwe zita, ndokumbira usarudze kana kuriseta saizvozvo:
Iwe unogona kuisa iyo yakamisikidzwa zita refaira zvakananga kana tinya iyo bhatani rekutarisa uye sarudza rakasarudzika zita refaira.
Iwe unogona kusarudza fomati yeiyo yakagadziriswa PST faira mubhokisi re combo padivi peiyo yakamisikidzwa faira edit bhokisi, zvinogona mafomati ari Outlook 97-2002 uye Outlook 2003-2010. Kana iwe ukasiya fomati se "Auto Kutsunga", saka DataNumen Outlook Repair ichagadzira iyo PST faira inoenderana neAptlook yakaiswa pakomputa yemuno.
Baya bhatani, uye DataNumen Outlook Repair kuda start kuongorora iyo PST faira, kudzoreredza uye kuunganidza zvinhu zvirimo, uye nekuisa zvinhu izvi zvakadzorerwa mune nyowani yakatarwa PST faira rine zita rakaiswa muDanho 6. Tichashandisa Outlook_fixed.pst semuenzaniso.
Kana saizi yeOptlook_fixed.pst yasvika pamuganhu preset muDanho rechipiri, DataNumen Outlook Repair ichagadzira yechipiri PST faira inonzi Outlook_fixed_1.pst, uye edza kuisa zvinhu zvasara mufaira irori.
Kana iyo yechipiri faira yasvika pamuganhu wekuseta zvakare, DataNumen Outlook Repair ichagadzira yechitatu PST faira inonzi Outlook_fixed_2.pst kugadzirisa zvinhu zvasara, zvichingodaro.
Mukuita, kufambira mberi kubhawa
ichaenderera mberi kuratidza kuti kupatsanuka kufambira mberi.
Mushure meichi chiitiko, kana iyo sosi yakanyanyisa pamusoro PST faira rakakamurwa kuita akati wandei madiki maPST mafaera zvinobudirira, iwe uchaona bhokisi remeseji seizvi:
Iye zvino unogona kuvhura akapatsanurwa mafaera ePST rimwe nerimwe ne Microsoft Outlook. Uye iwe unowana zvese zvinhu zvepakutanga zvakadarikidza PST faira zvakapararira pakati pemafaira akapatsanurwa.
Cherechedza: Iyo demo vhezheni icharatidza inotevera meseji bhokisi kuratidza kubudirira kwekuparadzaniswa:
Mune mafaera matsva ePST akapatsanurwa, zvirimo mumessage uye zvakabatanidzwa zvinotsiviwa neruzivo rweedemo Ndapota Raira iro rakazara vhezheni kutora zvirimo zvirimo.
Yakakamura Huru PST Faira mune Diki Diki